နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ဂျီးရီးယားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ဂျီးရီးယားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: February 01, 2019 In: AppointmentNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ဂျီးရီးယားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ဂျီးရီးယားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-နိုင်ဂျီးရီးယား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရည်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာကဏ္ဍ၊ အားကစားကဏ္ဍ၊ ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍ၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍနှင့် ကွဲပြားသော လူမျိုးစုမျိုးနွယ်များ အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး ကဏ္ဍတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ နိုငျဂြီးရီးယားသံအမတျကွီး H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ နိုငျဂြီးရီးယားသံအမတျကွီး H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli အား ယနေ့ နံနကျ ၁၁ နာရီတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ-နိုငျဂြီးရီးယား နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျရေး၊ နှဈနိုငျငံအကွား သဘာဝဓါတျငှရေ့ညျထုတျလုပျမှု နညျးပညာပိုငျး ဆိုငျရာကဏ်ဍ၊ အားကစားကဏ်ဍ၊ ယဉျကြေးမှုကဏ်ဍ၊ ရုပျရှငျထုတျလုပျမှုကဏ်ဍနှငျ့ ကှဲပွားသော လူမြိုးစုမြိုးနှယျမြား အတူတကှ ယှဉျတှဲနထေိုငျရေးကဏ်ဍတို့နှငျ့ စပျလဉျြး၍ ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ ဆှေးနှေးခဲ့သညျ။